Ny kojakoja tsara indrindra ho an'ny AirTags izay azonao vidiana izao | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo fitaovana vaovao natolotr'i Apple antsika tamin'ny Keynote farany tamin'ny 20 aprily ny AirTag, fitaovana vaovao ahafahantsika mahita izay ametrahanay azy. Fitaovana efa noresahana hatry ny ela saingy ela vao tonga. Rahampitso 23 aprily no ahafahantsika manao ny baiko voalohany amin'ny alàlan'ny tranokala Apple, mazava ho azy, tadidio fa tena ilaina tokoa ny mahazo a Kavina key na fehikibo karazana hitondrana ny AirTag amin'izay ilaintsika. Eto izahay dia mamela anao hanana ny sasany amin'ireo fitaovana tsara indrindra an'ny antoko fahatelo.
Tokony holazaina fa i Apple dia hamidy ireo vaovao ireo AirTag amin'ny vidiny 35 euro, dia manana fonosana 4 AirTags miaraka amin'ny 119 euro koa izahay izay hamonjentsika zavatra. Mazava ho azy, ny kojakoja Apple toy ny rojo vy na fehy dia manodidina ny 39 euro ka hatramin'ny 449 euro. Te hanana zavatra mora vidy kokoa ve ianao? Manomboka ny lisitray ...
1 Raharaham-pitsarana AirTag
2 Raharaha Vaultika Caseology
Ary izahay dia manomboka amin'ny rojo lakile izay lohalaharana amin'ity lahatsoratra ity, avy amin'ny marika AirCovered Afaka jerenao amin'ny Amazon (ao amin'ny magazay amerikana miaraka amin'ny fandefasana any Espana). ny silika vokatra vaovao ary afaka mahita amin'ny loko samihafa isika. Ny marika dia toa noforonina hanamboarana ity fitaovana ity ary amin'ny endriny no heverinay fa safidy tsara.
Raharaha Vaultika Caseology
Amin'ity tranga ity dia hitantsika ny Caseology Vault Case, keychain miaraka amin'ny carabiner izay miala amin'ny famolavolana mpamokatra hafa. Sarona karazana tranga vita amin'ny TPU mahatohitra, tonga lafatra amin'ny fomba fijeriko hanampiana azy amin'ny valizy.
Fantatrao angamba ny mpanamboatra azy MoKo, manam-pahaizana manokana amin'ny kojakoja ho an'ny fitaovana Apple, dia vao nanomboka a keychain izay mitovy amin'ny safidin'i Apple, eny amin'ny antsasaky ny vidin'ny Apple.
Farany, iray amin'ireo marika mora vidy indrindra ho an'ny fitaovana Apple, Spigen dia sahy mampiasa keychain hoditra ho an'ny AirTags vaovao. Araka ny hitanao dia vita amin'ny hoditra izy io ary manana bokotra mandeha ho azy izay hanampy antsika hanala ny AirTag isaky ny mila izany isika, ny endrik'ilay AirTag dia hita amin'ny alàlan'ny lavaka afovoany satria misy an'ireo bokotra hafa.
Safidy mahaliana izay tsy isalasalana fa hanampy antsika hiaro ny AirTags vaovao antsika ary mazava ho azy ny zavatra ampanaovintsika azy. Ary ianao, Hanao AirTag ve ianao? Hisafidy ny fonosana efatra ve ianao? Ahoana ny hevitrao momba ny kojakoja natombok'i Apple sy ny mpanamboatra antoko fahatelo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny kojakoja tsara indrindra ho an'ny AirTags izay efa azonao vidina
Jaranor dia hoy izy:
Tsy resy lahatra amin'ireo famolavolana ireo aho, manantena zavatra hafa mitovy amin'ny paoma na mitovy nefa amin'ny vidiny sahaza azy. Ao amin'ny AliExpress ao anatin'ny andro vitsivitsy dia ho feno kojakoja amin'ireo.